DAAWO: Welwelka Amniga ee wasiiradda DF Soomaaliya oo sii kordhaya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar aan ka helnay qaar kamid ah wasaaraddaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa daaha ka rogaya in ay wasiiradda Xukuumaddu bilaabeen hab dhaqan cusub oo la xariira ammaankooda, ka dib markii ay diideen in xaafiisyadooda nadiifiyayaal loo diro, sidaas oo kalena ay jeebabkooda gashadeen furayaasha xaafiisyada.
Tanni ayaa ka dhigan ficilada ammaanka oo gaaray halkii ugu hooseysay ay cabsiduna ka bilaabatay wixii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday xarunta gobalka Banaadir.
Wasiiradda qaarkood ayaa sheegay in aysan marnaba aamineyn cidna, sidaas awgeedna ay waajib tahay in sidan ay sameeyaan si ay u xaqiijiyaan ammaanka.
Shaqaalaha aan joogtada iyo muhiimka aheyn ee wasaaraddaha ayaa laga joojiyey imaanshaha wasaaraddaha qaarkood, waxaana la muujiyey walaaca ammaanka oo gaaray meel xun.
Wasiiraddu waxay u arkeen ficilkii lagu qarxiyey Gudoomiye Yariisow oo xaafiiskiisu ku yaalay halka ugu ammaanka badan ee Muqdisho in ay tahay arrin iska fududaan karta in xaafiisyada qaraxyo lagu diyaariyo.
Talaabada ay wasiiradda iyo madaxda dawladdu ku dhaqaaqeen ayaakusoo beegmaysa xili baaritaanada hordhaca ah ee lagu sameeyey weerarkii xarunta gobalka Banaadir, ay muujinayaan in wax badan oo qariban ay dhex socdaan dawladda, gaar ahaana waxa loo yaqaano Labo shaarlayaasha.
Khayre ayaa xafiiskiisa ka eryay 37 qof ka dib qarraxii gobolka Banaadir.